Wasaaradda Bartoolka Soomaaliya oo soo dhaweysay xukun ay gaartay Maxkamadda sare ee Ingiriiska!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Wasaaradda Bartoolka Soomaaliya oo soo dhaweysay xukun ay gaartay Maxkamadda sare ee Ingiriiska!!
Wasaaradda Bartoolka Soomaaliya oo soo dhaweysay xukun ay gaartay Maxkamadda sare ee Ingiriiska!!
Oct 15, 2016WARAR
Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Soomaaliya ayaa soo dhoweysay xukunka ay gaartay Maxkamadda Sare ee Boqortooyada Ingriiska ee ku saabsanaa baaritaankii uu waday Xafiiska Baarista Musuq maasuqa Daran (Serious Fraud Office) oo ahaa in shirkadda Soma Oil ay siisay lacag qubarada Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Soomaaliyeed.
Xukunkaan ayaa shirkadda Soma Oil u xaqiijinaya eedeeyntii hay’adda Qaramada Midoobey u qaabilsan la socoshada cunaqabataynta Soomaaliya iyo Eritrea in uu yahayn mid aan loo heyn cadeyn.
Natiijadan ayaa la mid ah tii ay soo saareen sanadkii hore guddi madaxa banaan oo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya magacaabay, si ay arrinta eeda ah baaritaan ugu sameeyaan.
Guddigaan madaxa banaan ayaan wax cadeyn ah u helin waqtigaas in heshiiska tayaynta shaqalaha ee u dhexeeyay Wasaaradda Batroolka iyo shirkadda Soma oil uu ahaa mid wax kala bedelasho ah.
“Wasaaraddu waxey mar walba diyaar u tahay wada-shaqeyn iyo ka hortagidda eedeymaha lidka ku ah howlaha wasaaradda, Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta, waxay ku dadaalaysaa dhamaystirka hawlaha ku saabsan sahminta shidaalka Soomaaliya iyo la macaamilka shirkadaha batroolka”ayaa lagu yiri War saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale Wasaaradda ayaa sheegtay inay aaminsan tahay shuruudaha ugu horeeya ee batrool baaris laga sameeyo wadamada dahan sida Soomaaliya in uu yahay in la helo xeerar iyo sharci ku haboon.
“Sidaas daraadeed, anagoo la kaashanayna Bangiga Aduunka, ayaan dhameystirnay dib u eegis lagu sameeyay sharciga batroolka, xeerarka iyo nidaamka maaliyadda. Wasaaraddu waxey kaloo dib u eegis ku sameysay hanaanka heshiiska u dhaxeeynaya Soomaaliya iyo shirkadaha shidaalka, iyadoo taageero ka heleysa Bangiga Horumarinta Africa”ayaa war saxaafadeedka Wasaaradda lagu yiri.
Wasiirka Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta ayaa magacaabay guddi qubaro ah, kana kooban qubarada wasaaradda, xafiiska Garyaqaanka Guud ee Dowladda, iyo Bangiga Aduunka si ay dib u eegis ugu sameeyaan sharciga Shidaalka Soomaaliyeed ee 2008, Hayadda Nidaaminta Batroolka iyo Shirkadda Batroolka Qaranka Soomaaliyeed.
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya way ka warqabtaa in ku howlaha ka faa’ideysiga kheyraadka dabiiciga ah in uu halis gelin karo nabadda iyo xasiloonida wadan kasta, haddii aanan la marin wado sax ah ee lagu maamulo kheyraadka ayadoo marka hore la yeelanayo aragti mideysan oo ku aadan ka faaidaysiga kheyraadka waddanka.
Ugu dambeyn Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta ayaa sheegtay inay ku howlan tahay helida heshiis ku meelgaar ah oo ku saabsan sidii batroolka dakhligiisa iyo maamulkiisaba loo wadaagi lahaa, isla markaana ay doonayaan in la sii wado fulinta waajibaadka naga saaran qaranka iyo shacabka soomaaliyeedba oo ay masuuliyadnimo iyo daahfurnaansho ku dheehan tahay.
Previous PostDaawo Sawiro: Wafdi kasocda Dowlada Soomaaliya oo Xarunta Jowhar u yimid xalinta Cabashooyin Jira!! Next PostFBI oo qabatay koox Maraykan ah oo qarxin rabay dhismeyaal ay Soomaali degan yihiin Daawo Sawiro!!